Staying Anonymous (part one) | Shwekoyantaw
Published : 6:24 AM Author : shwekoyantaw
မှန်ရာကိုဝင်ခံရရင်ဒီပို့ ကို ကျွန်တော်သိသလောက်တင်ပြရေးသာတာဖြစ်ပါတယ်...။
ဂယ်ပြောတာ Black Hat တစ်ယောက်အတွက် လူမသိသူမသိနေထိုင်ဖို့က အရေးကြီးတယ်လေ...။ကျွန်တော် စကေးကတော့( ၀ )level ဆိုတော့သိပ်ပုန်းစရာလိုဘူးပေါ့ဗျာ....:D...
နောက်တာပါခုတင်ပြမှက HF ကပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်ကို မသိတသိ ပြန်ရေးပေးလိုက်တာ..
PS; ကျွန်တော်က ENG စောက်ရမ်း ကျွမ်းကျင်တော့ အမှာပါရင် ခုထဲကတောင်းပန်ပါ၏....
တကယ်တော့ Hacker တစ်ယောက်ဟာ online ပေါ်မှာကော် offline မှာကော မိမိ နေရာမှန်ကို မသိစေရန်အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်....တလောကတောင် BHG ကတစ်ယောက်တောင် တယ်လီပို့စ် မှာစစ် ဆေးခံရလို့ တဲ့တကယ့်လက်တွေ့
ဒီနေရာမှာပြော ချင်တာက ဒီအပိုင်းမှာ virus,Trojans ,root kit စတဲ့ရန်တွေက ကာကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်..
ဘယ်လောက်ပဲတော်တော် ကိုယ်သတိလွတ်သွားတာ ရင် Keylogger ၇န်တွေက တကယ်ဆိုးဝါးစေပါတယ်.
Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM) တဲ့ဆော့ဝဲက သင့်ကွန်ပြူတာထဲ ရောက်လာတဲ့ Malware တွေကို စစ်ဆေး ဖယ်ရှာပေးမှာပါ...။
Keylogger ရန်ကကာကွယ်ရအောင် anti keylogger program ဖြစ်တဲ့ KeyScrambler ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.....။
အထူးကိုပြောစရာမလိုတာပါ...ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် internet သုံးရင် firewall ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကို သုံးကို သုံးသင့်တယ်........။မူရင်းရေးသာသူကတော့ COMODO Firewall ကို ရည်ညွန်းပါတယ်...personal firewall software on Internet မှာ ဆုရထားတဲ့ဟာပါ...။
True Crypt ဆိုတာ အလကားရတဲ့ open source ဆော့ဝဲပါ...Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, and Linux. အတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်...
ဒါကတော့လူတိုင်းသိပါတယ် Deepfreeze ကိုစက်တိုင်းမှာသုံသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်...မူရင်ရေးသာသူက တော့တော်တော်လေးကိုရည်ညွန်းထားတာကို
CCleaner ဆိုတာခုဆိုင်တိုင်းလိုလို အိမ်တိုင်းလိုလို တင်ထားနေကြပါပြီ။ဒါ့ကြောင်သေခြာရှင်းပြမနေတော့
ပါဘူး...deleting files, clearing temp files, cache, စသောလုပ်ဆောင်ချက်များအပြင် အများကြီးပါပါ
cookies ဆိုတာစားကောင်းရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး သင့်ကိုပိုင် Pass တွေ သင်internet သုံးတုန်းက cookies
တွေကျန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ပါမယ့်သာပြင်....။ဒီနိုင်ငံမှာတော့ သိပ်မလုပ်ကြဘူးရယ်....မထင်ပါနဲ့ မကျန်ခဲ့တာ
အကောင်ဆုံးပါပဲ....။အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ ကျကျနနရှင်းချင်တယ် ဆိုရင် အဲဒီ့ cookies တွေကို ၀ါးစားလိုက်
အဲဟုတ်ပါဘူး Flash Cookie Remover ကိုသုံး...လိုက်ကြ...။
Part one ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ....နောက်ထပ် online protection လာဦးမယ်....။နည်းပညာဆို တာလေ့
လာဖို့ မကုန်ပါဘူး....ကျွန်တော်သိသလောက်တင်ပြတာဆိုတော့ လိုအပ်ချက်တွေရှိ နေဦးမှာပါ....သိတဲ့သူ
တိုင်ရီနိုင်သလို...မသိသေးသူတွေအတွက် အနည်းငယ်မျှ အသိပညာရနိုင်လောက်ပါတယ်ဗျာ...။
Labels: defence, tools, tutorial |